Izibonelelo zoMthi weLaburnum
I-Tabex iphuhliswa ngokwendalo kwisiseko seCytisine Ifakiwe kwisityalo iCytisus laburnum (iGolden Rain acacia)
ICytisine kunye noMthi weLaburnum
I-Cytisine, isicatshulwa sesityalo esihlala sisetyenziswa kwimpuma Yurophu ukunceda kwiminqweno yamasiko ahambelana nokutshaya kubonakala kungcono kakhulu emsebenzini kunamachaphaza kunye neentsini.
Ayinakudidaniswa nebhloko yokwakha i-cytosine, i-cytisine sisicatshulwa se-alkaloid kwi-laburnum okanye kumthi wegolide wemvula (iLaburnum anagyroides), ekhula kwimozulu efudumeleyo kwiindawo ezahlukeneyo zase Europe. I-Cytisine isebenza ngokuthintela ukufikeleleka kwe-nicotine kwii-receptors zengqondo eziyolisayo.
Njenge-nicotine, i-cytisine inetyhefu xa ifunwa ngamanani amakhulu (njengaso nasiphi na isityalo esimiselweyo) kodwa ikhuselekile kwiidosi eziphantsi. ICytisine iveliswe kumazwe aseMpuma Yurophu kumashumi eminyaka ubukhulu becala ePoland naseBulgaria kwaye iyaqhubeka nokusetyenziswa njengoncedo lokumisa kumazwe asempuma Yurophu njengangoo-1960 kodwa ayaziwa kakhulu kwenye indawo. I-Tabex luphawu lwentengiso lweSopharma Pharmaceuticals esekwe eSofia, eBulgaria owasungula iTabex kwaye wayifumana okokuqala kwiminyaka ye-70.
Izifundo zeklinikhi zibonisa ukuba unyango ngomhlaba we-Tabex® lukhokelela kubantu abayeka ukutshaya ngaphezulu kwe-57% yabantu.
I-Cytisine ineepropathi ezifanayo nokutshaya kodwa kwinqanaba elincinci lobutyhefu. I-Tabex® ibonakalisa phakathi kwezona ziphumo zibalaseleyo ukuza kuthi ga ngoku ngoncedo lokuyeka ukutshaya ngokwendalo!
I-Tabex® inyamezeleke ngokukodwa, kwaye isetyenziswa kunyango, ivumela inkqubo ethe chu yokuyeka ukutshaya ngaphandle kweziphumo ebezingalindelekanga. Akukho ziphumo ziphambili zichazwe nge-cytisine kwaye iimeko ezinobulali zibonisa ukukhathazeka okuncinci kwesisu xa kusetyenziswa iidosi eziphezulu.
Isebenza njani iTabex ngaphakathi kwengqondo yakho? Uyisebenzisa kanjani iTabex Izifundo zonyango kwiTabex